International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Press Release: UN Review Shows Lack of Progress Made by the Outgoing Government
Press Release: UN Review Shows Lack of Progress Made by the Outgoing Government
By: Burma Partnership, Equality Myanmar, Free Thinkers, Karen Human Rights Group, Kachin Women's Association – Thailand, Palaung/Ta'ang Women's Organization, Pyi Gyi Khin, Shan Women's Action Network, Smile Education and Development Foundation, United Against Child Trafficking
Burma/Myanmar's response to its second cycle Universal Periodic Review (UPR) at the United Nations Human Rights Council (the Council) reflects the lack of progress made by the outgoing government and the need for key human rights challenges to be addressed, representatives who attended the Council said today.
The UPR plenary took place at the 31st Regular Session of the UN Human Rights Council on 17 March, 2016. Over 10 civil society representatives from Burma/Myanmar were in Geneva for the adoption of the recommendations made by the Council's member and observer states to the Burma/Myanmar Government.
"The new National League of Democracy (NLD) led government should setanew tone by developingacomprehensive, measurable and time-bound action plan to implement the recommendations agreed upon, while consider reviewing crucial recommendations that the outgoing administration did not accept," said Aung Myo Min from Equality Myanmar. While Burma/Myanmar Government accepted 166 recommendations out of the 281 recommendations it received from member and observer states, similar recommendations related to key human rights issues agreed upon by the Burma/Myanmar Government during its first cycle of the UPR remains unaddressed. In addition, out of 166 accepted recommendations, only 135 were fully accepted by the government.
"The Burma/Myanmar Government committed to protecting human rights defenders and ensuringasafe and enabling environment for civil society as they play an important role in ensuring genuine democratic reforms. Yet there is no indication that President Thein Sein will release all political prisoners including student protesters and their supporters before the end of his administration," said Nwe Zin Win from Pyi Gyi Khin. "Fresh charges have been brought against activists and human rights defenders, even going back to protests they took part in overayear ago and rights-based, independent civil society continue to face intimidation and threats by authorities," she continued.
"Entrenched impunity is institutionalized on the ground, particularly in ethnic areas where armed conflict and militarization is ongoing, grave human rights violations such as torture, forced labor, rape and sexual violence by the Burma/Myanmar Army continue with complete impunity," said Jeesica Nhkum from Kachin Women's Association - Thailand. Over 120,000 people have been displaced due to the renewed fighting in Kachin State as fighting intensifies in northern Burma/Myanmar. Aid has yet to reach those in need as the Burma/Myanmar Government continues to block humanitarian aid from reaching conflict ridden areas in northern Burma/Myanmar, while over 110,000 refugees also remain in refugee camps along the Thailand-Burma/Myanmar border without sufficient aid.
"The new government must ensure an inclusive and meaningful peace process as well as greater inclusion of women, particularly from conflict affected communities. Otherwise, ethnic communities will continue to suffer the same abuses as it has in the past," Jessica Nhkum continued. While the Burma/Myanmar Government accepted five recommendations that called on the government to combat impunity for human rights violations, it refused to accept recommendations that urged the government to end impunity of the military and government officials who commit human rights violations, including sexual violence.
The government refused to accept many recommendations that urged the government to combat hate speech and to protect the rights of religious minorities. The outgoing government continued to deny its discriminatory policies and practices against religious minorities until their last days in administration – particularly against Muslim minorities – by refusing to accept 10 recommendations specifically urging them to review and repeal the recently enacted "Protection of Race and Religion Laws".
"In the first cycle of the UPR, the Burma/Myanmar government agreed to ratify and fully implementanumber of core human rights treaties, including the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment, and yet, it has not ratified them. The review shows that the outgoing government did not implement recommendations from its first UPR cycle and thus the overall human rights situation continues to deteriorate. Ratifying and implementing such treaties are essential if the government is committed to improving the human rights situation in the country," said Khin Ohmar from Burma Partnership. "The international community must also be held accountable and transparent in their engagement with Burma/Myanmar. In particular, the UPR recommending states must ensure that their recommendations are actually implemented during this second cycle of the UPR," she continued.
Jessica Nhkum, Kachin Women's Organization – Thailand, +66(0)899547074
မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့၊ညီမျှခြင်းမြန်မာ၊ Free Thinkers၊ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့၊ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (ထိုင်းနိုင်ငံ)၊ပလောင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၊ပြည်ကြီးခင်၊ရှမ်းအမျိုးသမီးရေးရာဆက်သွယ်လှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်ရေးအသင်း၊စမိုင်းပညာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေရှင်း၊ United Against Child Trafficking
ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက်လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေပုံမှန်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ(UPR) တွင် သက်တမ်းကုန်ခါနီး မြန်မာအစိုးရ၏ တုန့်ပြန်မှုများက တိုးတက်မှုများဆိတ်သုန်းနေသည်ကို ဖော်ပြနေပြီး၊ အဓိကကျသော လူ့အခွင့်အရေး စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်နေကြောင်း ကောင်စီအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သော မြန်မာ UPR ဖိုရမ် ကိုယ်စားလှယ်များက ယနေ့ ပြောကြားလိုက်သည်။
UPR စုံညီစည်းဝေးပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၇ ရက်၌ (၃၁) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအပေါ် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီအဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံများနှင့် လေ့လာသည့်နိုင်ငံများက ပေးသည့်အကြံပြုချက်များကို အတည်ပြချက်များ ရယူသည့် ဂျနီဗာမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော၎င်းအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာအရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၁၀ ဖွဲ့ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
"အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဦးဆောင်မယ့် အစိုးရသစ်အနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရက သဘောတူထား ပြီးဖြစ်တဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် ပြည်စုံမှုရှိပြီး၊ တိုင်းတာနိုင်တဲ့ အချိန်အတိကျ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ချမှတ်ခြင်းအားဖြင့် လမ်းကြောင်းသစ် ချမှတ်လိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာ လက်ရှိသက်တမ်းကုန်ခါနီး အစိုးရက လက်မခံခဲ့တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကိုလဲ ပြန်ပြီးသုံးသပ်ဖို့အတွက် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။" ဟု ညီမျှခြင်းမြန်မာမှ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောသည်။ မြန်မာအစိုးရသည် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် လေ့လာသည့်နိုင်ငံများမှ ပေးသော အကြံပြုချက်ပေါင်း ၂၈၁ ခုထဲမှ ၁၆၆ ခုကို လက်ခံခဲ့သော်လည်း ပထမအကြိမ် UPR အစည်းအဝေးတွင် ၎င်းတို့ လက်ခံကတိပြုခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အလားတူအကြံပြုချက်များကို ယနေ့အချိန်အထိ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ ထို့ပြင် လက်ခံခဲ့သော အကြံပြုချက် ၁၆၆ ခုတွင် ၁၃၅ ခုကိုသာ အပြည့်အဝ လက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
"စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နိုင်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေကို ကာကွယ်မှုတွေပေးမယ်၊ အရပ်ဘက်လူထု အဖွဲ့အစည်းတွေကို လွတ်လပ်၊ လုံခြုံမှုရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဖော်ဆောင်ပေးမယ်လို့ အစိုးရအနေနဲ့ ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ပေမယ့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ သူတို့ကို ဝန်းရံခဲ့သူတွေအပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို သူ့သက်တမ်းကုန်တဲ့အချိန်အထိ လွတ်ပေးမယ့် အရိပ်အယောင်တောင် မတွေ့ရပါဘူး" ဟု ပြည်ကြီးခင် အဖွဲ့မှ နွယ်ဇင်ဝင်းက ပြောသည်။ ဆက်လက်ပြီး ၎င်းက "လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်လောက်က ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့် အမှုသစ်တပ် တရားစွဲဆိုခံနေရပြီး လူ့အခွင့်အရေးလုပ်နေတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်း တွေဟာ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ချိန်းခြောက်မှုတွေနဲ့ ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
"အပစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းမှကင်းလွတ်နေမှုဟာ အောက်ခြေအထိ စနစ်တကျအမြစ်တွယ်နေပြီး အထူးသဖြင့် လက်နက်ကိုက်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေပွားနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီဒေသတွေမှာ စစ်တပ်ဖြန့်ကျက်မှုတွေ၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ၊ အဓ္ဓမခိုင်းစေမှုတွေ၊ မုဒိန်းမှုတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ စတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို မြန်မာစစ်တပ်က အပစ်ပေးအရေးယူ ခံရခြင်း လုံးဝမရှိပဲ ကျူးလွန်နေကြပါတယ်" ဟု ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (ထိုင်းနိုင်ငံ) မှ ဂျက်စီကာ အန်ခွမ်းက ပြောသည်။ ကချင်ပြည်နယ် တစ်ကျော့ပြန် စစ်ပွဲများကြောင့် ဒေသခံပြည်သူပေါင်း ၁၂၀၀၀၀ ကျော် ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။ သို့သော် မြန်မာအစိုးရမှ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသော နေရာများသို့ လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများကို ဆက်လက်ပိတ်ပင်နေခဲ့သောကြောင့် လိုအပ်သောနေရာများသို့ ပြည်သူများထံသို့ အကူအညီများ မရောက်ရှိခဲ့ကြပေ။ တစ်ချိန်ထဲတွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စစ်တစ်လျောက် ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၁၁၀၀၀၀ ကျော်သည် လုံလောက်သော အကူအညီများ မရရှိကြပေ။
ဂျက်စီကာ အန်ခွမ်းမှ ဆက်လက်၍ "အစိုးရသစ်ဟာ အများပါဝင်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရမှာဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးတွေ အထူးသဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာတွေကသူတွေကို ပိုမိုပါဝင်လာအောင် ဆောက်ရွက်ပေးရပါမယ်" အစိုးရသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအပေါ် အပစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်အား တိုက်ဖျက်ရေး အကြံပြုချက် ၅ ခုကို လက်ခံခဲ့သော်လည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများနှင့် အခြားလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ကျူးလွန်နေသော တပ်မတော်နှင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ အပစ်ပေးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်နေခြင်းကို အဆုံးသတ်ရေး အကြံပြုချက်များကိုမူ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
"အစိုးရဟာ ပထမအကြိမ် UPR လုပ်ငန်းစဉ်မှာတုန်းက ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်အခြားရက်စက်လူမဆန်သည့်လူ့ ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေသောပြုမူဆက်ဆံမှုများဆန့်ကျင်ရေးသဘောတူစာချုပ်ခေါ် Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment အပါအဝင် အဓိကကျတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးစာချုပ်တွေကို အတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးပြီး အပြည့်အဝအကောင်အထည် ဖော်ပါမယ်လို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့အထိ အတည်ပြုလက်မှတ် မထိုးသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ခုဒီတစ်ကြိမ် သုံးသပ်မှုတွေ ပြန်လုပ်တဲ့အခါ အစိုးရဟာ ပထမအကြိမ် UPR အစည်းအဝေးမှာတုန်းက သဘောတူထားတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်း မရှိတာ တွေ့ရပြီး ဒါကြောင့် ယေဘူယျအားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေဟာ ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့ဆိုရင် ခုလို အခြေခံကျတဲ့ စာချုပ်တွေကို အတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့လည်း အစိုးရနဲ့ ထိတွေ့လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမှာ ဖြစ်ပြီး တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလဲလည်း ရှိရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေဟာ ဒုတိယအကြိမ် UPR မှာ မြန်မာအစိုးရကို သူတို့ပေးခဲ့တဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းရှိအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်" ဟု မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ အဖွဲ့မှ ခင်ဥမ္မာကပြောသည်။
ဦးအောင်မျိုးမင်း၊ညီမျှခြင်းမြန်မာ +၉၅ (၀)၉၄၄၈၀၁၅၃၀၆
နွယ်ဇင်ဝင်း - ပြည်ကြီးခင် +၉၅(၀) ၉၅၀၃၁၂၄၆
ဂျက်စီကာအန်ခွမ်း - ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (ထိုင်းနိုင်ငံ) +၆၆(၀) ၈၉၉၅၄၇၀၇၄
ခင်ဥမ္မာ - မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ +၆၆(၀) ၈၁၈၈၄၀၇၇၂